Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Gacan Kahadal Ah oo Dhexmaray Ciidanka Wayaanaha & Shacabka Lagumaysto.
Dagaalo Gacan Kahadal Ah oo Dhexmaray Ciidanka Wayaanaha & Shacabka Lagumaysto.
Posted by Dulmane	/ November 27, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee woqooyiga Gobolka Axmaarada aya sheegaya qalalaase aad u xoogan oo dadka deegaanka iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya ee aagaas udhaxeeya.
Sida xogta aan kuhelayno qalalaasaha ayaa bilowday kadib markii garoonka kubada cagta ee magaalada Gonder ay isugu yimaadeen dadwayne aad ubadan oo doonayay in ay daawadaan ciyaar kubada cagta ah oo labo kooxood oo Gobolka Axmaarada kawada dhisan halkaas uga socday.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay dadwaynihii faraha badnaa ee halkaas isugu yimid bilaabeen qaylo iyo sawaxan iyagoo kudhawaaqayay erayo taliska wayaanaha kadhan ah, waxayna dadwaynuhu durbaba bilaabeen dhagaxtuur iyo socod qaylo wata.
Ciidanka wayaanaha oo goobta soogaadhay ayaa lasheegayaa in ay bilaabeen rasaas nool iyagoo sida lasheegay tooganayay dadka shacabka ah ee mudaharaadayay, waxayna sida lasheegayo dileen dad shacab ah oo aad ubadan.
Dhinaca kale dadka shacabka ah oo dareemay cadawnimada ciidanka wayaanaha iyo sida ay dadka uxasuuqayaan ayaa guryahooda hub kala soobaxay iyagoo rasaas ugu jawaabay ciidankii wayaanaha ee dadka shacabka ah halabsanayay, waxaana lasoo warinayaa in ay jiraan ciidan badan oo wayaanaha laga laayay.
Dhaawaca labada dhinac ayaa lasheegayaa in uu buuxdhaafiyay isbitaalada magaalada Gonder, waxaana magaalada laga soo sheegayaa xiisad colaadeed oo aad usii waynaan karta.
Dhinaca kale wararka aan kahelayno Magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in uu iska hor imaad xoogan dhex maray qaar kamid ah shacabka magaalada iyo ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya.
Iska hor imaadka ayaa bilowday kadib markii dadwayne aad ubadan oo daawanayay tartan dhinaca orodka ah oo magaalada kasocday ay bilaabeen mudaharaadyo iyo kacdoon shacab, waxaana lasheegayaa in ay fooda isdareen shacabkii iyo ciidankii wayaanaha.
Taliska wayaanaha ayaa ka caagay in uu qabto munaasabado ay dad badani isugu imaan karaan waxaana hada bilaabatay in ay intii shacab ah ee is aragtaba mudaharaad bilaabaan.